Mayelana NATHI - Sichuan Zhengcheng Starlight Energy Saving Technology Co., Ltd.
ISichuan Zhengcheng Starlight Energy Saving Technology Co, Ltd. yasungulwa ngoNovemba 2013. Kungumkhiqizi oqeqeshiwe wezimpawu zasendlini nangaphandle namabhodi wezitolo ezidayisa ukudla okulula, izitolo ezinkulu, amakhemisi amaketanga, izindawo zokudlela zokudla okusheshayo, amabhange, amagalaji kaphethiloli, njll. eChina. Sizibophezele ekunikezeni izimpawu ezisezingeni eliphakeme nemikhiqizo yelogo kumakhasimende avela emhlabeni wonke. Namuhla, sesibe ngomunye wabakhiqizi abahamba phambili bokukhiqizwa kwamabhodi wezimboni embonini yamaketanga aseChina.
IZhengcheng Starlight Energy-saving Technology Co, Ltd. izibophezele ekucwaningeni nasekuthuthukiseni nasekukhiqizeni amabhokisi wokonga ugesi, aklanyelwe izitolo ezilula, amakhemisi, izitolo ezinkulu, amabhange, amagalaji kaphethiloli, izindawo zokudlela nezinye izitolo zamaketanga ukukhiqiza okuhle namabhokisi wokukhanya wokonga amandla wekhwalithi ephezulu. Eminyakeni eyisikhombisa edlule, sesithole amalungelo obunikazi amane kazwelonke emkhakheni wamabhokisi wesitolo esikahle, futhi sihlinzeke ngezinsizakalo zobuchwepheshe kumikhiqizo engaphezu kuka-100 eChina. Abathengi bethu abangochwepheshe bakhetha ngokucophelela izinto zokwenza imikhiqizo, abaklami abangochwepheshe abazenzele wena izimpawu, izinga eliqinile lokulawulwa kwethimba lomkhiqizo, kanye nochwepheshe abanolwazi abakuqondisa ukuthi usebenzise imikhiqizo nokugcinwa kwangemva kokuthengisa.
Ngaphezu kwalokho, sisungule imboni yezobuchwepheshe, futhi ukubambisana nathi kuzosindisa ikhomishini yomuntu ophakathi nendawo futhi kulondoloze izindleko zakho. Ukubambisana kwethu kuyisimo sokuwina.
Sizibophezele ekunikezeni amakhasimende ngezinsizakalo zobungcweti futhi siphendula ngenkuthalo ukungabaza kwabo; sinaka ukusebenza kanzima kwawo wonke amalungu, ukuze wonke umsebenzi abe nomuzwa wokuthi ungowakhe: sigxila ekwakhiweni kwemikhiqizo emisha, futhi silandele njalo ikhwalithi yomkhiqizo, kuphela ukukunikeza imikhiqizo ehamba phambili; Sinamathela esimisweni sokwethembeka ekubambisaneni kwethu, ukubambisana kwethu kuzoba umphumela wokuwina.
Vumela uZhengcheng aye emhlabeni, wazise umhlaba ngoZhengcheng.
Ukubambisana okusekelwe ebuqothweni, ukuwina win.
Zuza inhlonipho yamakhasimende ngolwazi lobuchwepheshe kanye nesimo sengqondo somsebenzi esibucayi
Kungumsebenzi wawo wonke amabhizinisi ukuthatha izibopho zomphakathi. Eminyakeni eyisikhombisa eyedlule, uZhengcheng ubelokhu enamathele kwifilosofi yokuvikela abantu nokuvikela imvelo.
Vumela wonke umsebenzi abe nomuzwa wokuthi uyilungu futhi uzuzile
Ukusebenza kanzima kwelungu ngalinye lomndeni wakwaZhengcheng kube nomthelela empumelelweni ekhazimulayo kaZhengcheng namuhla. Amalungu omndeni ayahloniphana, afunde komunye nomunye, akhule nomunye nomunye, athuthuke ndawonye, ​​futhi afake njalo amandla amasha eZhengcheng. Kungumkhathi ohambisanayo ongahlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo ezinhle kakhulu, futhi senze iZhengcheng ikhule ngokuchuma ngokwengeziwe.
Inkampani yethu ihlale inethemba lokuthi imikhiqizo yethu ingafaka isandla emvelweni. Sisebenzisa amashubhu anamalungelo obunikazi ukwenza amabhokisi alula ukonga ugesi. Ngaphezu kwalokho, sisebenzisa i-acrylic kuphela ukwenza amabhokisi alula. Izinto zokwakha imfucuza ze-Acrylic zingasetshenziswa kabusha futhi zisetshenziswe kabusha. Amakhasimende amaningi ngokwengeziwe akhetha imikhiqizo yethu, ekhombisa nokwanda kokuqwashiswa komphakathi ngokongiwa kwamandla.
Izimpawu Zokukhangisa, I-Pharmacy Signboard, Umshini Owenza Ibhokisi Elikhanyayo Lebhodi Lesibonakaliso, Izimpawu Ezikhanyisiwe, I-Blister Light Box Signboard, Ibhodi lokungena elingaphandle le-Light Light,